Plasma & Adeegga Goynta Gawaarida Gaarka ah & Soo-saaraha | Processing Birta Hengli
Soosaarka Hengli wuxuu adeegsadaa mashiinada plasma ee CNC. Tikniyoolajiyada jarista Plasma waxay awood noo siineysaa inaan jarno biraha dhumucdiisuna tahay 1… 350 mm. Adeeggeena jarista plasma wuxuu waafaqsan yahay kala soocida tayada EN 9013.
Goynta plasma, sida goynta ololka, waxay ku haboon tahay jarista walxaha qaro weyn. Faa'iidada ay ku leedahay tan dambe ayaa ah suurtagalnimada in la gooyo biro kale iyo aalado aan suurta gal ahayn jarista ololka. Sidoo kale, xawaaraha ayaa si weyn uga dheereeya jarista ololka mana jirto baahi loo qabo in horay loo kululeeyo biraha.
Aqoon-isweydaarsiga Aqoonsiga waxaa la aasaasay 2002, oo ah aqoon-isweydaarsigii ugu horreeyay ee shirkadeena. Ilaa 140 shaqaale ah. 10 wuxuu dhigaa mashiinnada jarjara ololka, 2 nooc oo mashiinada jarjarada plasma ah ee CNC, 10 makiinado hidda-shidaalka.
Faahfaahinta Adeegga Goynta Ololka CNC
Tirada qalabka: 10 kumbiyuutar （4/8 qoryo）
Dhumucda goynta: 6-400mm
Shaxda Shaqada ： 5.4 * 14 m
Qeexitaanka Goynta Plasma ee CNC, Adeegyada Heer & Dheer
Mashiinka Goynta Plasma CNC
Tirada qalabka: 2 nooc guns 2/3 qori）
Jadwalka Miisaanka: 5.4 * 20m
Birta goynta: birta kaarboonka, birta birta ah, naxaasta, aluminium iyo macdano kale
Tirada qalabka: 10 nooc
Codsashada: isku dheelitirka & sameynta
Faa'iidooyinka Goynta Plasma
Qiimaha hoose - Mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ayaa ah qiimaha hoose ee adeegga goynta plasma marka la barbar dhigo hababka kale ee goynta. Qiimaha hoose ee adeeggu wuxuu ka yimid dhinacyo kala duwan - kharashyada hawlgalka iyo xawaaraha.
Xawaare sare - Adeegga goynta Plasma mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn waa dhaqsiyaha badan. Tani waxay si gaar ah ugu muuqataa taarikada biraha, halka goynta laser-ka ay tahay mid tartan leh marka ay timaado goynta xaashida. Xawaaraha kordhay wuxuu awood u siinayaa inuu soo saaro tiro aad u tiro badan waqti go'an, taasoo hoos u dhigaysa qiimaha qaybkiiba.
Shuruudaha hawlgalka oo hooseeya - Qodob kale oo muhiim ah oo hoos u dhigaya qiimaha adeegga. Jaraajida Plasma waxay adeegsadaan hawo cadaadis iyo koronto si ay u shaqeeyaan. Tan macnaheedu waxa weeye in aanu jirin qalab qaali ah oo loo baahan yahay in lagu raaco mashiinka wax lagu gooyo.
Hore: Xarunta Saadka
Xiga: Dhammaystirka Adeegga Daaweynta